विचार – Page4– Darshankhabar
नेपाली कांग्रेसमा गुटैगुट
दर्शन खबर १९ जेष्ठ २०७६, आईतवार
नवीन झा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुटले पार्टी संगठन कमजोर बन्दै गएको छ। यस्तै संसद्मा कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको भूमिका सशक्त नहुँदा प्रश्न उठ्न थालेको छ। कांग्रेसले...
दर्शन खबर १३ जेष्ठ २०७६, सोमबार
अरुण बराल । एकजना सरकारी कर्मचारी सेतो नम्बर प्लेटको गाडीमा चढेर वनभोज वा बिहेभोजमा गए भने उनी कोसँग सबैभन्दा बढी डराउँछन् ? ताप्लेजुङका मेयरले सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्दा...
सार्वजनिक सुनुवाई किन ?
कर्णालीको नून र चामल बाटोमै बेचिन्छ
राजधानीको मुटुमा रहेको संघीय संसद् भवनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दा कर्णालीमा बाटोबाटै नून बेचिन्छ, चामल बेचिन्छ । अरू धेरै चीज बेचिन्छ । यो प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जुम्लाबाट...
चिन्तामणि शर्मा सुर्खेत । २०४९ साल अघि सुर्खेतका दुई कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानी गुठगतरुपमा एउटै खेमामा रहेका थिए । दुबैको आदर्श ब्यक्ति थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई ।...
राष्ट्र निर्माणमा शिक्षा र हाम्रो भुमिका ।
समाज रुपान्तरणको प्रमुख आयम भनेको शिक्षा हो,जुनदेशको शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ त्यहाँको नागरिक सामाजिक हुन्छन । एउटा मानिसलाई जिम्मेवार नागरिक बनाउन शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । समृद्ध समाज बनाउन...
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले तीन महिनाभित्र बाँकी रहेका सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रिन्ट गरिसक्ने जनाएको छ । मन्द्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग प्रिन्ट तथा कार्ड खरिद तथा छपाइका लागि सम्झौता गरेपछि...